Modular Chiller, Air Cooled Industrial Cooling Equipment, Manufacturers and Suppliers Set in China
Low Chiller Temperature
Shenzhen city KayDeli Refrigeration Equipment Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE Description:Modular Chiller,Air Cooled Industrial Cooling Equipment,Kitapo mangatsiatsiaka,Industrial Laser Chiller,,
Low Chiller Temperature
Baolina kilaometatra vetaveta
Ny Tempoly ambany ririnina
Air Chilled Air Industrial
Rafitra Cooling Industrial System
Air Cooled Industrial Cooling Equipment
Rano mihandrona fandroahana
Fitaovana fanodinana rano rantsan-tànana
Rano fandroana milamina
Indostria fanadiovana rano
Sciller Air Cooled Chiller
Rano fanadiovana rano
Rano mangatsiaka mafana
Home > Products > Industrial Chiller > Air Cooled Industrial Cooling Equipment
Air Cooled Industrial Cooling Equipment
Ny vokatra avy amin'ny Air Cooled Industrial Cooling Equipment , mpanofana manokana avy any Shina, Modular Chiller , Air Cooled Industrial Cooling Equipment mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Kitapo mangatsiatsiaka R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Air Cooled Water Cooler ho an'ny dobo filomanosana
Fiaramanidina vaovao mialokaloka avy amin'ny Air Cooled Industrialized
Air Cooling Ice Chiller
Lozam-pifaneranana amin'ny indostrian'ny lasantsy
Chiller Industrial Air Cooler
Fonosana: hazo boaty
Manana fahafaha-manao: 5000
taratasy fanamarinana: ISO9001:2015
KC / KWB sehatra indostrialy endri-javatra no tena ampiharina amin'ny orinasa Plastic & Rubber; Afaka manara-maso tsara ny hafanana ara-boajanahary izy io ary hampihena ny famolavolana ny famolavolana, hampitombo ny kalitaon'ny vokatra ary hanatsara ny famokarana vokatra. Ny fampiasana azy ireo koa dia ny...
Shina Air Cooled Industrial Cooling Equipment mpamatsy
KC / KWB sehatra indostrialy endri-javatra no tena ampiharina amin'ny orinasa Plastic & Rubber; Afaka manara-maso tsara ny hafanana ara-boajanahary izy io ary hampihena ny famolavolana ny famolavolana, hampitombo ny kalitaon'ny vokatra ary hanatsara ny famokarana vokatra. Ny fampiasana azy ireo koa dia ny fampiasana metaly, ny Mechanical & Engineering, ny Chemical & Pharmaceutical, ny sakafo & ny zava-pisotro, laser, indostrian'ny Elektronika, Textile, Electroplate, ny fizahana semi-conductor, ny jiro rano, vakan-drano, ny fanorenana ary ny miaramila.
¨ Noporofoin'ny mpamorona marika manerantany fanta-daza sy ny kôdônera avo lenta ary ny evaporator, miantoka ny fahombiazan'ny hatsikana, ny fihenan'ny angovo, ny lozam-pifamoivoizana ary ny faharetan'ny fiainana.
¨ Ny mari-panaovan'ny rano 5 ° C hatramin'ny 35 ° C.
¨ R22 nasiam-panitsiana, karazana karazan'olona R407C, R410A, R404A, R134A ho an'ny safidy, fihenam-bidy mahomby.
¨ Ho an'ny evaporator sy ny condensera avo lenta dia miantoka ny fiasan'ny mpitrandraka mandritra ny 45C.
¨ Fanaraha-maso ny mikrôpepika mikarakara ny filaminana ara-potoana araka ny tokony ho izy ao anatin'ny ± 1 ℃.
¨ Lozabe mavesatra sy bakteria lehibe.
¨ Fitaovam-pandehanana serivisy fanamainana vita amin'ny vy, tsy misy vy na fantson-jiro avo lenta.
¨ Betsaka ny fiarovana amin'ny fiarovana ny fiara mpamonjy voina.
¨ Ny fampivoarana ny valan-javamaniry fanadiovana ao anaty tohotra dia miantoka ny fampiasana ny mari-panafana mahazatra toy ny fanamainana ny valan-tsofoka, mampihena ny fitomboan'ny hafanana, ary mampitombo ny fahombiazany.
¨ KWB ny fantsom-bary KWB izay nanala ny kodiaran'ny indostria nanaovana akorandriaka sy ny fantson-drano, ny fanamafisana ny hafanana hafanana sy ny fahombiazan'ny hatsikana, dia tsara ny ampiasaina ao amin'ny faritra be loatra ny mari-pana amin'ny tondra-drano misy rano be.
¨ KC air cooled industrial chiller dia nanamboatra condensateur alimina fin / copper tube, mora ho an'ny fanadiovana sy fametrahana.
¨ Fitondrana herinaratra: 1PH 220V / 50HZ ----- 1 / 2HP hatramin'ny 2HP
3PH 380V / 415V 50HZ ----- 3HP hatramin'ny 60HP
Copyright © 2019 Shenzhen city KayDeli Refrigeration Equipment Co.,Ltd. Zo rehetra voatokana. Ampandehanin'i